More Information Archives - एक हप्ता सोच्नुहोस्
जब तपाई ख्रीष्टियान बन्नुहुन्छ तब तपाईलाई स्थानिय मण्डलीहरुमा जानलाई सल्लाह दिइन्छ । यदी त्यहाँ कुनै मण्डली छैन भने तपाई अरु ख्रीष्टियानहरुसगँ मिलेर आफै नयाँ मण्डली खोल्न सक्नुहुन्छ ।
साधारण रुपमा भन्नुपर्दा, मण्डली भनेको सारा विश्वभर भएका ख्रीष्टियानहरुको जमात हो । सामाजिक तौरमा भन्नुपर्दा मण्डली चाही ख्रीष्टियानहरु भेट्ने र परमेश्वरलाई प्रशंसा गर्ने ठाँउ हो ।
तपाई यदी मण्डलीमा जान चाहनुहुन्छ भने तपाई आफ्नो ठाँउ वरिपरीको केही मण्डलीहरुमा जानसक्नुहुन्छ । जसरी मानिसहरु एकअर्कामा भिन्न छन् त्यसरी नै मण्डलीहरु बीच पनि केही भिन्नताहरु हुनसक्छ ।ु
मण्डलीको छनावट गर्दा, ती मण्डलीका ख्रीष्टियानहरु बाईबल परमेश्वरको वचन हो भनेर विश्वास गर्छन् की गर्दैनन् भन्ने कुरा ध्यानमा राख्नुपर्छ । यदी त्यहाँका ख्रीष्टियानहरुले बाईबलका सबै कुराहरु सत्य छैनन् वा बाईबल बाहेक त्यहाँ अरु धरै नियमहरु छन् वा ’em मूर्तिपुजा गर्छन् भने राम्रो यही हुन्छ की तपाई अर्को मण्डली खोज्नुहोस् ।
मण्डलीमा आउने ख्रीष्टियानहरुका जीवनशैलीलाई हेरेर त्यो मण्डलीको केन्द्र चाही परमेश्वर हुनुहँुदोरहेछ तपाई थाहा पाउन सक्नुहुन्छ ।
एउटा असल मण्डलीले “एउटा ख्रीष्टको परिवार” जस्तो व्यवहार गर्छ ; परमेश्वरलाई प्रशंसा गर्न , ’em सँगै विश्वासमा बढ्न, एकअर्कामा वचन बाँड्न एकअर्कालाई सहायता गर्छन् । ख्रीष्टियानहरु ख्रीष्ट जस्तै बन्नका लागि एकअर्कामा प्रेम देखाउँछन् , एकअर्कालाई सहायता गर्छन् ।
बप्तिष्मा चाँही तपाई येशूको साँचो चेला हुनुहुन्छ भनी मानिसहरुलाई देखाउने एक बाहिरी चिन्ह हो ।
प्रक्रृयाहरु धरै साधारण छ । तपाई सुरुवात पानीमाथि उभिएर, बसेर वा घूँडा टेकेर गर्नुहुन्छ । अरु ख्रीष्टियानहरुले तपाईलाई पानीभित्र डूबाएर पानी बाहिर निकाल्नु हुनेछ । तपाईले पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर र पवित्र आत्मा परमेश्वरको नाउँमा बप्तिष्मा लिनुहुनेछ । (अझै पढ्नुहोस् ः मत्ती २८ः१८–१९) सरल भाषामा भन्नुपर्दा, बप्तिष्मा ख्रीष्टियानको जीवनमा भएको भित्री परिवर्तनको बाहिरी गवाही हो । तपाईका पाप र भूलहरु सबै “धोइएका” छन् । बप्तिष्माले ख्रीष्टको मृत्यू , दाहसंस्कार र पुनरुत्थानलाई पनि दर्शाउछ ।
ख्रीष्टियान बप्तिष्मा भनेको उद्घार पाइसकेपछि प्रभूप्रति आज्ञाकारी देखाउने एक प्रकृया हो ; बप्तिष्मा उद्घारसगँ गाँसिएको भएतापनि , तर बचाइनलाई यो एक मापदण्ड चाँही होइन ।
प्रार्थना भनेको परमेश्वरसँगको बातचित हो । परमेश्वरले तपाईको प्रार्थनाको उत्तर तत्कालै नदिएता पनि तपाईको प्रार्थना प्रति उहाँको ध्यान महशूस गर्न सक्नुहुनेछ ।
परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्दा आफ्नो प्रार्थनामा इमान्दार हुनुहोस् ( हिबू्र १०ः२२) । तपाई के गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा उहाँलाई पहिले नै थाहा छ । उहाँ तपाईको सृष्टिकर्ता भएकोले उहाँलाई सम्पूर्ण आदर दिनुहोस् जसको उहाँ हकदार हुनुहुन्छ ।ु
जसरी परमेश्वर तपाईलाई प्रेम गर्नुहुन्छ त्यसरी नै उहाँले तपाईको प्रार्थनाको उत्तर पनि दिनुहुन्छ । उहाँ हामी भन्दा धेरै बुद्घिमान् हुनुहुन्छ किनकी त्यसैले उहाँका योजनाहरु हामीले बुझ्ने भन्दा महान् छन् त्यसैले तपाईको प्रार्थनाको उत्तर तपाईले सोचेको जस्तो सधँै हुदैन ।
कहिले काँही तपाईको जीवनमा परमेश्वरको योजना बुझ्न समय लाग्छ । कहिले काँही तपाईले संघर्ष भोग्नुपर्ने हुनसक्छ, मानिसहरुले हानी पु¥याउन सक्छन्, कठिन परिस्थितीहरुमा पर्न सक्नुहुन्छ । जब तपाईले कसैको र केही कुराको निम्ति प्रार्थना गर्नुहुन्छ अनि प्रतिफल तपाईले आशा गर्नुभए अनुसार आएन भने निराश नहुनुहोस् । कहिलेकाँही तपाईको धैर्यतालाई जाँचमा राखिएको हुन्छ र नतिजा तपाईले अपेक्षा गरेको भन्दा अलि फरक हुनसक्छ ।
एक असल संसारिक पिता जस्तै, परमेश्वर आफ्ना नानीहरुको ख्याल राख्नुहुन्छ र ’emको दीर्घकालिन हितको ’boutमा हेर्नुहुन्छ ।
बाईबलले परमेश्वर वास्तवमा तीन व्यक्तित्व हुनुहुन्छ भनी सिकाउँछ । यसलाई त्रिएक पनि भनिन्छ । हामी मानिस जातिलाई एक अस्तित्वमा तीन व्यक्तित्व भन्ने कुरा बुझ्न कठिन हुन्छ । यस्तो प्रकारको अस्तित्व भएको हामीले देखेका छैनौ, त हामी यसको परिदृष्य पनि बनाउन सक्दैनौ ।
बाईबलमा यी तीन व्यक्तिको ’boutमा यसरी ब्याख्या गरिएको छ, पिता परमेश्वर, पूत्र परमेश्वर र पवित्र आत्मा परमेश्वर । पिता परमेश्वरलाई सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ, पूत्र परमेश्वरलाई मानिस र परमेश्वरबीचको मध्यस्थकर्ता हुनुहुन्छ,र पवित्र आत्मा चाहिँ परमेश्वरको आत्मा हो जो मानिसमा वास गर्नुहुन्छ । यदि कोहीले परमेश्वरलाई आफ्नो सृष्टिकर्ता भनी र येशू ख्रीष्ट उसका गल्तीहरुका निम्ति मर्नुभएको हो भनी विश्वास गर्छ भने त्यसले पवित्र आत्मा ग्रहण गर्छ ।
किनकी तपाई पवित्र आत्मालाई देख्न सक्नुहुन्न, तपाईले उहाँलाई “अनुभव” गर्नुपर्ने हुन्छ । परमेश्वरले तपाईलाई तपाईको जीवनमा अगुवाई गर्नुहुनेछ । पवित्र आत्माले तपाईको जीवनलाई नियन्त्रण गर्नुहुन्न, तपाई आफ्नो मर्जीको मालिकनै रहनुहुनेछ तर केही कुराहरुमा उहाँले तपाईको आँखा खोलिदिनुहुनेछ । जब तपाईलाई यो दिइन्छ, तब तपाई पवित्र आत्माको शक्ति र विशेष बरदानहरुमा रहनुहुनेछ ।
पवित्र आत्माले के गर्नुहुन्छ ?
येशूलाई पछ्याउने शक्ति दिनुहुन्छ र तपाईको ख्रीष्टियान जीवनमा सहायता गर्नुहुनेछ ; दिनदिनै येशू जस्तै बन्नको लागि परिवर्तित हुन सहायता गर्नुहुनेछ ।
उहाँले तपाईलाई परमेश्वरको ’boutमा सिकाउनुहुनेछ र सत्यतामा डो¥याउनुहुनेछ ।
(यूहन्ना १६ः१३–१४) तपाई ख्रीष्टियान बन्नुभन्दा अघिदेखि तपाईले नजानेका कुराहरु उहाँले सिकाउनुहुनेछ ।
उहाँले तपाईको निम्ति प्रार्थना गरिदिनुहुनेछ । जस्तै एउटा वैवाहिक जीवनमा र मानिसको सम्बन्धमा हुन्छ, जसै तपाई पवित्र आत्मासगँ धेरै समय बिताउनुहुन्छ, त्यसैगरि तपाई पवित्र आत्माबाट धेरै कुरा अनुभव गर्नुसक्नु हुनेछ ।
उदाहरणको लागि जब एउटा वैवाहिकले एकअर्कासगँ पर्याप्त समय बिताउदैनन् त्यो जोडी छुट्टीन्छन् ।
परमेश्वरले पवित्र आत्माद्घारा एक ख्रीष्टियान जीवनमा चाहिने बरदानहरु तपाईलाई दिनुहुनेछ । ती बरदानहरु बाईबलमा पाउन सकिन्छ । ( उदाहरणको लागि १ कोरिन्थि १२) ती बरदानहरुले तपाईलाई जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि सहायता गर्नेछ । तपाईले ती बरदानहरु खोजी राख्नु पर्दैन, परमेश्वरले ती तपाईलाई चाहिएको अवस्थामा दिनुहुनेछ ।
किन येशूलाई “परमेश्वरका पूत्र” भनिन्छ ?
येशू आफैले भन्नुभयो कि उहाँ परमेश्वरका पूत्र हुनुहुन्छ ः तब ’em सबैले भने, “त्यसो भए, के तँ भरमेश्वरको पूत्र होस्?” उहाँले ’emलाई उत्तर दिनुभयो, “तपाईहरु नै भन्नुहुन्छ, म उही हुँ ।” (लूका २२ः७० ) येशूले कहिलेकाही परमेश्वरलाई पिता भनेर पनि सम्बोधन गर्नुभयो ।
परमेश्वरले पनि येशूलाई पूत्र भनी बोलाउनुभयो, तब स्वर्गबाट यो वाणी आयो, “यिनी मेरा प्रिय पूत्र हुन्, यिनीसगँ म अति प्रसन्न छु ।” (मत्ती ३ः१७) यसले पिता परमेश्वर र पूत्र परमेश्वर बीचमा रहेको सम्बन्धलाई देखाउँछ ।(लूका १ः३२)बाईबलीय इतिहासमा भएको “पूत्र” शब्द सम्बन्धको प्रतीक हो ।
बाईबलको अर्को भागमा येशूलाई परमेश्वरको वचन भनिन्छ । हिब्रु भाषामा “पूत्र” भन्ने शब्दको अर्थ वंश वा चेला हो । रोमी ८ः१४ अनुसार जब तपाई ख्रीष्टको चेला बन्नुहुन्छ, तब तपाईले पवित्र आत्मा पाउनुहुनेछ र परमेश्वरको सन्तान बन्नुहुनेछ, ’cause सबै परमेश्वरका आत्माले डो¥याइएका हुन्छन्, ’em नै परमेश्वरका सन्तान हुन् ।
बाईबलका केही महत्वपूर्ण पदहरुपरमेश्वरको प्रेम युहन्ना ३ः१६ ’cause परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो, कि उहाँले आफ्ना एकमात्र पुत्र दिनुभयो, ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस् तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस् । १७ ’cause परमेश्वरले संसारलाई दोषी ठहराउन भनी पुत्रलाई संसारमा पठाउनुभएन, तर संसार उहाँद्धारा बाँचोस् भनेर पठाउनुभयो । १८ जसले उहाँमाथि विश्वास गर्छ, त्यो दोषी ठहरिँदैन, तर विश्वास नगर्नेचाहिँ अघि नै दोषी ठहरिएको छ , ’cause उसले परमेश्वरका एकमात्र पुत्रको नाउँमा विश्वास गरेकौ छैन ।
सृष्टि उत्पत्ति १ः१–३ आदिमा परमेश्वरले आकाशमण्डल र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो । २ पृथ्वी आकार विनाको र शून्य थियो । अथाह समुद्रमाथि हन्धकार थियो, र परमेश्वरका आत्मा पानीमाथि परिभ्रमण गर्दैरहनुहुन्थ्यो । ३ अनि परमेश्वरले भन्नुभयो, “उज्यालो होस् ।”तब उज्यालो भयो ।
येशू ख्रीष्टको जन्म लुका २ः६–१४ ’em त्यहाँ भएकै बेला मरियमको बालक जनमाउने बेला आयो । ७ तिनले आफ्नो जेठो छोरो जन्माइन् र उहाँलाई लुगाले बेह्रेर डूडँमा राखिन्, किनकी ’emका निम्ति पौवामा ठाँउ थिएन । ८ त्यही इलाकामा गोठालाहरु थिए, जसले चउरमा बसेर राती आफ्नो बगालको रखवाली गर्थे । प्रभुका एक जना स्वर्गदूत ’emकहाँ देखा परे, र प्रभुको तेज ’emका वरिपरि चम्क्यो, अनि ’em साह्रै डराए । १० तब स्वर्गदूतले ’emलाई भने,“नडराओ, ’cause हेर, म तिमीहरुलाई बडोÞ आनन्दको सुसमाचार सुनाउँछु, जो सबै मानिसहरुका निम्ति हुनेछ । ११ आज दाऊदको सहरमा तिमीहरुका निम्ति एक जना मुक्तिदाताको जन्म भएको छ, जो ख्रीष्ट प्रभु हुनुहुन्छ । १२ तिमीहरुलाई चिन्हचाहिँ यो हुन्छ ः तिमीहरुले एउटा बालकलाई लुगाले बेह्रेको र डूँडमा सुताइरहेको भेट्टाउनेछौ ।” १३ तब एक्कासि ती स्वर्गदूतसँग स्वर्गीय सेनाको एउटा दल दैखा प¥यो । परमेश्वरको स्तुति गर्दै, ’emले भने, १४“सर्वोच्चमा परमेश्वरलाई महिमा, र पृथ्वीमा जुन मानिसहरुसँग उहाँ प्रसन्न हुनुहुन्छ, ’emलाई शान्ति !”प्रभु मेरो गोठालो हुनुहुन्छ
भजनसंग्रह २३ः१–३ परमप्रभु मेरा गोठाला हुनुहुन्छ, मलाई केही कुराको अभाव हुँदैन । उहाँले मलाई हरियो खर्कमा लेटाउनुहुन्छ, र मलाई शान्त पानीको छेउमा डो¥याउनुहुन्छ । ३ उहाँले मेरो प्राणलाई पुनर्जीवित पार्नुहुन्छ । उहाँले आफ्नो नाउँको खातिर मलाई धार्मिकताको मार्गमा डो¥याउनुहुन्छ ।
बाईबलका केही महत्वपूर्ण पदहरु (२)परमेश्वरबाट हामीलाई कसैले पनि अलग गर्न सक्दैन रोमी ८ः३८–३९ किनकी म यो पक्का गरी जान्दछु, कि मृत्युले वा जीवनले, स्वर्गदूतहरुले वा प्रधानताहरुले, वर्तमानका कुराहरुले, वा शक्तिहरुले, ३९ उचाइले वा गहिराइले, वा सारा सृष्टिमा भएका कुनै पनि कुराले, ख्रीष्ट येशू हाम्रा प्रभुमा भएका परमेश्वरको प्रेमबाट हामीलाई अलग गर्न सक्नेछैन ।
परमेश्वरको सबैभन्दा महत्वपुर्ण आज्ञा मत्ती २२ः३६–४० “गुरुज्यू, व्यवस्थामा महान् आज्ञा कुन हो?” ३७ उहाँले तिनलाई भन्नुभयो, “तैंले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदयले, र आफ्नो सारा प्राणले, र आफ्नो सारा समझले प्रम गर्नु । ३८ महान् र प्रथम आद्दा यही हो । ३९ दोस्रो पनि त्यस्तै छ, तैंले आफ्नो छिमेकीलाई आफैलाई जस्तै प्रेम गर्नु । सारा व्यवस्था र अगमवक्ताहरुका शिक्षाको आधार नै यी दुई आज्ञाहरु हुन् । ”
कसैले पनि परमेश्वर र धन दुवैको सेवा गर्न सक्दैन मत्ती ६ः२४ “कसैले दुई मालिकको सेवा गर्न सक्दैन । ’cause त्यसले एउटालाई घृणा गर्नेछ र अर्कोलाई प्रेम गर्नेछ । अथवा त्यसले एउटाप्रति भक्ति राख्नेछ, र अर्कोलाई त्यसले तुच्छ ठान्नेछ । तिमीहरुले परमेश्वर र धन दुवैको सेवा गर्न सक्दैनौ ।
हाम्रो परमेश्वर बचाउने परमेश्वर हुनुहुन्छ भजनसंग्रह ६८ः२०–२१ हाम्रा परमेश्वर बचाउनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ, र परमप्रभू परमेश्वरमा नै मृत्यूबाट मुक्ति छ । २१ निश्चय नै परमेश्वर आफ्ना शत्रुहरुका टाउको कुच्च्याउनुहुनेछ, ती मानिसहरुले केशले भरिएका टाउको जो आफ्ना पापमा लागिरहन्छन् ।
प्रेम १कोरिन्थी १३ः१–७ मैले मानिसहरु र स्वर्गदूतहरुको भाषामा बोंले तापनि ममा प्रेम छैन भने, म हल्ला मचाउने घण्टा र झ्याइँ–झ्याइँ गर्ने झ्याली मात्र हुन्छु । २ मसगँ अगमवाणी बोल्ने शक्ति होला, र सबै रहस्य र सबै ज्ञानहरु बुझ्न सकूँला, र पहाडहरु हटाउन सक्नेसम्मको सम्पुर्ण विश्वास मसित होला, तर ममा प्रेमचाहिँ छैन भने केही पनि होइनँ । ३ यदि मैले सारा सम्पत्ति बाँडिदिएँ, र मेरो शरीर जलाउनलाई दिइहालें, तर मसित प्रेम छैन भने मलाई केही लाभ हुँदैन । म सहनशील हुन्छ र दयालु हुन्छ । प्रेमले डाह गर्दैनर न शेखी गर्छ। ५ प्रेम हठी हुँदैन, न ढीट हुन्छ । प्रेमले आफ्नै कुरामा जिद्दी गर्दैन, झर्को मान्दैन, खराबीको हिसाब राख्दैन । ६ प्रेम खराबीमा प्रसन्न हुँदैन, तर ठीक कुरामा रमाउँछ । प्रेमले सबै कुरा सहन्छ, सबै कुराको पत्यार गर्छ, सबै कुरामा आशा राख्छ, सबै कुरामा स्थिर रहन्छ ।
केही उपयोगी बाइवलका पदहरु(३)
परमप्रभु तपाई मलाई चिन्नु हुन्छ ।भजनसंग्रह १३९ः १–३ हे परमप्रभु, तपाईले मेरो पारख गर्नु भएको छ , अनि मलाई चिन्नुहुन्छ ।२ तपाईले मेरो बसाइ र मेरो उठाइ जान्नुहुन्छ, टाढैबाट मेरो विचार बुझनुहुन्छ । ३ तपाईले मेरो बाहिरी जवाइ र मेरो सुताइ स्पष्टसँग जान्नुहुन्छ, र मेरा सबै आचरणहरुसँग तपाई परिचित हुनुहुन्छ ।सधै खुःशी रहनु, परमेश्वर नजिकै हुनुहुन्छ ।
फिलिप्पी ४ः४–७ प्रभुमा सधै आनन्द गर, म फेरि पनि भन्दछु ः आनन्द गर । ५ तिमीहरुको सहनशिलता सबै मानिसहरुलाई थाहा होस् । प्रभु नजिकै हुनुहुन्छ । ६ कुनै कुरामा चिन्तित नहोओ, तर हरेक कुरामा प्रार्थना र निवेदनद्धारा भन्यवादसहित तिमीहरुका बिन्ती परमेश्वरमा जाहेर होऊन् , ७ र समझले नै भ्याउन नसकिने परमेश्वरको शान्तिले तिमीहरुका हृदय र तिमीहरुका मनलाई येशूमा रक्षा गर्नेछ ।
हाम्रो भविष्यः नयाँ स्वर्ग र नयाँ पृथ्वीप्रकाश २१ः १–२ र ४ , तब मैले नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वी देखें , किनकि पहिलो आकाश र पहिलो पृथ्वी बितिगएका थिए । समुन्द्र त अब छँदैथिएन । २ अनि मैले परमेश्वरबाट दुलाहको निम्ति दुलही जस्तै गरी सिङ्गारिएर तयार पारिराखेकी , अर्थात पवित्र सहर , नयाँ यरुशलेम स्वर्गबाट तलतिर झरिरहेको देखें ।४ उहाँले ’emका आँखाको आँसु पूर्ण रुपले पुछिदिनुहुनेछ , र फेरि मृत्यु नै हुनेछैन, र शोक र पीडा पनि हुनेछैन । किनकि पहिलेका कुराहरु बितिसकेका छन् ।
परमेश्वरमा भरोसा राख्नु ।हितोपदेश ३ः५–६ , आफ्नो सारा हृदयले परमेश्वरमा भरोसा राख् र तेरो आफ्नै समझशक्तिमा भर नपर ६ आफ्ना सारा मार्गमा उहाँलाई सम्झी , र उहाँले तेरा मार्गहरु सोझा तुल्याइदिनुहुनेछ ।
थप जानकारीको लागि पछाडि रहेको हाम्रो लिङ्कमा हेर्न सक्नुहुनेछ ।
बाईबलले जीवनको महत्तवपुर्ण चरणहरुलाई र मार्गदर्शन ( आज्ञाहरु ) समावेश गरिएको पाईन्छ जुन मानिसहरुले पालना गर्नै पर्दछ । धेरै जसो यी आज्ञाहरु मानिसहरुको आफ्नै लाभको निम्ति हुने गर्दछ । यहाँ सबै भन्दा महत्तवपुर्ण आज्ञा प्रेम हो । ( बाइवलमा ः १ कोरिन्थ १३ )परमेश्वरसंग भएको सन्देश उहाँले मानिसद्धारा बोल्नु भयो, बाइबलद्धारा सन्देश जीवनमा आयो, हामी देख्न सक्छौ कि मानिसहरु र सम्पुर्ण विश्व नै ’emको आफ्नै छनोटको कारण कठिनाई भग्दैछन् । ’em जसले परमेश्वरलाई इमान्दारीपुर्वक छनोट गर्दछन् ’emले उहांको योजना पनि थाहा गर्न सक्दछन् । तर ती मानिसहरु जसले परमेश्वरको विरोधको कुराहरुको छनोट गर्दछन् ’emको कुनै भविष्य हुदैन ।
थप जानकारीबाइबलले मुख्य दुई ओटा भागलाई जोड दिदछ , पुरानो करार र नयाँ करार । पुरानो करारले मानिसहरुको सृष्टिको ’boutमा वर्णन गर्दछ जसमा परमेश्वरले मानिसहरुलाई उहाँको आफ्नै प्रजा हुन चुन्नु भयो । हरेक चुनौतिको अवस्थामा पनि परमेश्वरमा पुर्ण विश्वास योग्य रहने मानिसहरु बचाइने छन् । सम्पुर्ण पुरानो करारले येशूको ’boutमा बताउद छ । ( हेर्नुहोस् ः येशूको थप जानकारी )
नयाँ करारले येशू संसारमा रहदाको जीवनको ’boutमा बताउदछ , धेरै पुरानो करारमा भएको अगमवाणीहरु पुरा भएको ’boutमा पनि बताउद छ । ( थप जानकारी शिर्षकमा पाउनु हुनेछ ) । नयां करारले येशू संसारमा रहनु हुदा मानिसहरुले देखेका घटानाहरु ’bout बताउद छ र छोटकरीमा यसले येशूले सिकाउनु भएको विषयहरु, क्रुसको घटना र पुनरुत्थानको ’boutमा पनि बताउद छ ।जब तपाईले बाइवललाई शुरु देखि अन्त्य सम्म अध्यायन गर्नु हुन्छ , तपाईले समान्य कुरालाई सिक्न सक्नु हुनेछ । मुख्य कुरा चाहिं परमेश्वरको सृष्टिप्रति उहांको प्रेम ’bout हो ,तर तपाईले ती मानिसहरुको ’boutमा पनि थाहा गर्न सक्नु हुनेछ कि जसले परमेश्वरलाई त्यागेका थिए । परमेश्वरको प्रेमले गर्दा उहाँको पुत्रद्धारा गर्नु भएको कार्यमाथि जसले विश्वास गर्दछ ती मानिसहरुले मृत्युमाथि पनि विजय प्राप्त गर्ने छ ।